Daawo Video: Jeneral Xaamud oo xilkiisa ku weynaya erayadan!! - Caasimada Online
Home Warar Daawo Video: Jeneral Xaamud oo xilkiisa ku weynaya erayadan!!
Daawo Video: Jeneral Xaamud oo xilkiisa ku weynaya erayadan!!
Muqdisho (Caasimada Online) – Xukuumaddda cusub ee Soomaaliya ayaa la filayaa in ay isbadal weyn ku sameyso hoggaanka taliyeyaasha ciidamada kala duwan, waxaana soo baxaya warar sheegaya in taliyaha booliska uu noqon doono mas’uulka ugu horeeya ee isbadalka saameyn doono.
Taliyaha booliska Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo bishii Dicembar xafladdii dabaaldega maalinta booliska Soomaaliyeed oo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku sugnaa, isagoo markaasi si cad u taageeray madaxweyen Xasan Sheekh. yirina ” “Madaxweyne saddex sarkaal oo baarlamaanka soo gala codkooda waa ku tashaneysaa..”.
Kalmadaasi oo dhalisay eedeymo ay murashaxiintii uu ka mid ahaa Farmaajo u jeediyeen saraakiisha ciidamada ee ku lug yeeshay ololihii doorashada ee lagu taageeray Xasan Sheekh, kalmadaasi sida khaldan ugu dhacday ayaa laga yaabaa inay soo dedejiso xil ka qaadista Generaal Xaamud.